कमल थापाको अध्यक्ष पद धरापमा, किन सम्हाल्न सकेनन् राप्रपा ? - Dainik Nepal
कमल थापाको अध्यक्ष पद धरापमा, किन सम्हाल्न सकेनन् राप्रपा ?
दैनिक नेपाल २०७४ साउन २ गते ७:३१
काठमाडौं, २ साउन । अध्यक्ष कमल थापाको कार्यशैली र व्यक्तिवादी सोँचका कारण अहिले राप्रपाविभाजनको संघारमा पुगेको छ । केही महिनाअघिमात्रै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेको राप्रपाभित्र यो हबिगत किन आइलाग्यो भन्ने प्रश्नले बजार तताएको छ ।
सतहमा अनेकौं कारण देखापरे पनि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्चस्तरीय नीति तथा निर्देशन समिति निर्माण नगरिनुले नै यो बिग्रह निम्तेको पार्टी स्रोतको दावी छ ।
महाधिवेशनको समयमा राप्रपाकोउच्च नेतृत्व पंक्तिबीच केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो वैठकबाट नीति तथा निर्देशन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । केन्द्रीय समितिको वैठक पटक–पटक सम्पन्न भइसकेको छ । तर, एक्लै हिड्ने बानी भएका कमल थापाले आफ्नो भूमिकामा अंकुश लाग्छ भनेर निर्देशन समिति गठन गरेनन् । महाधिवेशनको सहमति उल्लंघन गरेको र विधानको व्यवस्था पालना नगरेकै कारण वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले यसअघि नै राप्रपा परित्याग गरिसकेका छन् ।
पशुपति शम्शेर राणाको हालको हस्तक्षेप पनि कमल थापाको एकलौटी कामकारवाही कै उपज रहेको राप्रपाका एक पदाधिकारीले बताए । ‘नीति निर्देशन समिति गठन भएकोभए पार्टीभित्र उचित सन्तुलन हुने थियो, अहिलेको बिग्रह आउने थिएन’, ती पदाधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहको चुनावी परिचालनमा देशव्यापी सघाउ पुग्ने थियो ।’
अध्यक्ष थापा एक्लैको खटनपटन, साँघुरो काम गराईका कारण राप्रपाले स्थानीय चुनावमा लज्जास्पदहार बेहार्नु परेको राप्रपाभित्र चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ । जसकारण थापामाथि अध्यक्ष पद त्याग्न चौतर्फी दवाब परेको राप्रपाका नेताहरूबीच चर्चा हुन थालेको छ ।
अध्यक्षले महाधिवेशनको ‘स्पिरिट’ र विधानको व्यवस्था लत्याएकै कारण राप्रपाफेरि फुट्ने अवस्थामा छ ।
विधानको पहिलो सर्त अनुसार नीति निर्देशन समिति गठन नगर्नु, अध्यक्षको वैधानिक दायित्व बमोजिम चुनाव जिताउन नसक्नु, ४२ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन विधान अनुकूल गरियो भन्नु चाहिँ विधानको आफू खुशी व्याख्या गर्नु मात्र रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
आठ प्रतिशत महिला शून्य, युवा विद्यार्थी, ५ प्रतिशत मधेसी, शून्य मुस्लिम, एक प्रतिशत दलितको मनोनयन गरिनु कहाँ विधान अनुकूल छ ? राप्रपा वृत अहिले यस्तै प्रश्नले स्थान पाएको छ । ९२ प्रतिशतपुरुष, ९५ प्रतिशत पहाडे मनोनीत गरेर अध्यक्ष कमल थापाले पञ्चायती लिगेसीलाई कायम राखेको अवस्था रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
‘एकताको महाधिवशेनबाट बनेको केन्द्रीय समिति भएकोले अध्यक्षले वरिष्ठ नेताहरूसँग परामर्श र समझदारी कायम गरेर मात्रै मनोनयन गर्नु पर्ने हो, पार्टी अध्यक्षले नै विधानको पालना नगरेकोले राप्रपामा संकट उत्पन्न भएको जनाइएको छ । पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा जसरी समझदारी कायम गरेर काम गरियो त्यसैको निरन्तरता भएकोभए विधानको सम्मान हुन्थ्यो । एकताको विधानको मर्म विपरीत ४२ जना आफूखुशी मनोनयन गर्दा पार्टी अहिले संकटमा छ ।
‘चुनावमा लज्जास्पद हार, पार्टीमा संकट, अध्यक्षको पूर्ण असफलताको प्रमाण हो,’ राप्रपाका एक नेता बताउँछन् । यति मात्रै होइन वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणा, दीपक बोहरा, रामकुमार सुब्बा, विराजबहादुर विष्ट, रेशमबहादुर लामासहितका नेताहरूका कारण अहिले कमल थापाको अध्यक्ष पद धरापमा पर्न सुरु गरेको राप्रपाभित्र बहस हुन थालेको छ । कमल थापाको निरंकुश शैली र व्यक्तिावदी चरित्रको अन्त्य गर्ने समय योभन्दा उपयुक्त नहुने आफू निकटका नेताहरूसँग सल्लाह गर्ने गरेको बताइएको छ ।
जगदीश राजभण्डारी, बसन्तविक्रम पाण्डे, प्रवीण ढुंगेल, विनोद भारती, राजीव लामिछानेलगायतका युवा विधार्थी नेताहरूले सामाजिक संजालमा मनोनयनको विरुद्ध अभियान नै छेडेका छन् । नेतृत्व पंक्तिलाई भेटेर उनीहरूले असन्तोष व्यक्त गर्दै छन् । मनोनीतमा कमल थापाका नातागोता, ‘गणेश प्रवृति’ र भजनमण्डलीले प्राथमिकता पाए पार्टीको मेरुरुदण्डको रुपमा स्थापित युवा विद्यार्थीलाई बेवास्था गरियो भन्ने ती युवा विद्यार्थीको आक्रोश छ ।
महाधिवेशनमा चुनाव हारेकालाई मनोनीत गरियो भन्ने पनि राप्रपामा ठूलै असन्तोष छ । ४२ जनामध्ये आधाभन्दा बढी सदस्यहरू महाधिवेशनमा चुनाव हारेका छन् । विधानको व्यवस्था विपरीत महिलालाई वास्ता नगरिएकोमा महिलाहरू अपहेलित महसुस गर्दै छन् । ‘अध्यक्षज्यूलाई कुन्ती शाही एक जना भए पुगीहाल्छ, त्यही नै ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वहोला नि’, एक महिला नेतृले कटाक्ष गर्दै भनिन् ।
महिलाको मानमर्दन भयो भनेर महिला नेतृहरूले पार्टीभित्र अभियान चलाउने तयारी गरेका छन् । आनन्दी पन्त, मीना सुवेदी भण्डारी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, बबिना मोक्तान लावती, बिजयकला राई, कमला शर्मा, सिर्जना बर्मा, शोभा शाही, मीना श्वर्णाकारलगायतका महिला नेतृहरूले समावेशी र मानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै दवाव दिने तयारी गरेका छन् ।
यसैबीच राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले उपाध्यक्ष दीपक बोहरालाई कारवाही गर्ने भन्ने चर्चा चलेको छ । ‘नेपाली राजनीतिमा कारवाही ‘किङ’को छवि बनाएका कमल थापाले आफ्ना ‘पुरानामण्ड’ले मित्रलाई कारवाही गर्ने आँट गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो समयले बताउँला’, एक पदाधिकारीले भने ।